ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန် သွားစေမယ့် အတွင်းသားလေး တွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန် သွားစေမယ့် အတွင်းသားလေး တွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ကြည့်ရှုသူတိုင်း ရင်ခုန် သွားစေမယ့် အတွင်းသားလေး တွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ သွန်းဆက် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
By Ga MonePosted on January 27, 2021
ပရိသတ် ကြီးရေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ ညို့အား ပြင်းပြင်း နဲ့ ရင်ခုန် စရာ ကောင်းလောက် အောင် ဖမ်းစား ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သွန်းဆက်လေး က တော့ လွတ်လပ် ပေါ့ပါး တဲ့ အလန်း စား ဖက်ရှင် လေး ကို ဝတ်ကာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပင်ကိုယ် အလှတရား တွေကို ပေါ်လွင်အောင် အထာ ကျကျ ပို့စ်ပေး နေတာ ဖြစ် ပါ တယ် … ။သူမ ဟာ နာမည် ရ မင်းသမီး တွေ ထဲက တစ်လက် ဆိုလည်း မမှား ပါဘူးနော် ။ ဗီဒီယို တွေ ခေတ်စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မှာလည်း ပရိတ်သတ် တွေ တစ်ခဲ နက် အားပေး မှု ဝန်းရံမှုတွေ ကို ရရှိခဲ့တာ ပါ … .
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ သွန်းဆက် က တော့ အမိုက် စား ခန္တာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအ လှတွေ နဲ့ တည်ငြိမ် ရင့်ကျက် တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါ တယ်..။ ယခု တစ်ခါမှာ လည်း သွန်းဆက် က ပျိုမဒီလေးတွေ အပြင် ပရိသတ် တွေ ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက် ထား တဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ပေါ်မှာတင်ပေး လာခဲ့ ပါတယ် … ။ ဒီပုံလေး တွေ နဲ့ လည်း သွန်းဆက် က ချစ်စရာ ကောင်းလောက်အောင် လှရက် လွန်းနေတာလဲ ဖြစ်ပါ တယ် … ။
သွန်းဆက် က မကြာ ခဏ ဆိုသလို ရယ်မော ပျော်ရွှင် စရာ ကောင်းတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး တွေကို ချပြလေ့ ရှိပါ တယ်..။ လတ်တလော မှာ ဆိုရင် လည်း မင်းသမီးချောလေး သွန်းဆက် ချစ် တဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် သူမရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးတွေ အပြင် ချစ်စရာ ကောင်း လွန်း နေ တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကို ဖော်ပြ ပေးတာ တွေ့ရပါ တယ် … ။ သွန်းဆက် လေး ရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ ဗီဒီယို လေးကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက် ပါ တယ် နော် … .
photo and video credit : Thun Sett facebook
ပရိသတ္ ႀကီးေရ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း နဲ႔ ရင္ခုန္ စရာ ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ ဖမ္းစား ထားတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး သြန္းဆက္ေလး က ေတာ့ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါး တဲ့ အလန္း စား ဖက္ရွင္ ေလး ကို ဝတ္ကာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ပင္ကိုယ္ အလွတရား ေတြကို ေပၚလြင္ေအာင္ အထာ က်က် ပို႔စ္ေပး ေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။သူမ ဟာ နာမည္ ရ မင္းသမီး ေတြ ထဲက တစ္လက္ ဆိုလည္း မမွား ပါဘူးေနာ္ ။ ဗီဒီယို ေတြ ေခတ္စား ခဲ့တဲ့ ကာလ မွာလည္း ပရိတ္သတ္ ေတြ တစ္ခဲ နက္ အားေပး မႈ ဝန္းရံမႈေတြ ကို ရရွိခဲ့တာ ပါ … .
ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရ သြန္းဆက္ က ေတာ့ အမိုက္ စား ခႏၲာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္းအ လွေတြ နဲ႔ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ တဲ့ မ်က္ႏွာေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားပါ တယ္..။ ယခု တစ္ခါမွာ လည္း သြန္းဆက္ က ပ်ိဳမဒီေလးေတြ အျပင္ ပရိသတ္ ေတြ ဆက္ဆီ က်က် ႐ိုက္ ထား တဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚမွာတင္ေပး လာခဲ့ ပါတယ္ … ။ ဒီပုံေလး ေတြ နဲ႔ လည္း သြန္းဆက္ က ခ်စ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လွရက္ လြန္းေနတာလဲ ျဖစ္ပါ တယ္ … ။
သြန္းဆက္ က မၾကာ ခဏ ဆိုသလို ရယ္ေမာ ေပ်ာ္႐ႊင္ စရာ ေကာင္းတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ေတြကို ခ်ျပေလ့ ရွိပါ တယ္..။ လတ္တေလာ မွာ ဆိုရင္ လည္း မင္းသမီးေခ်ာေလး သြန္းဆက္ ခ်စ္ တဲ့ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ သူမရဲ႕ အလန္းစား ပုံရိပ္ေလးေတြ အျပင္ ခ်စ္စရာ ေကာင္း လြန္း ေန တဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ေဖာ္ျပ ေပးတာ ေတြ႕ရပါ တယ္ … ။ သြန္းဆက္ ေလး ရဲ႕ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေလးနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေနတဲ့ ဗီဒီယို ေလးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
ရင်ခုန်စရာ အလှတရားတွေ အပြည့် နဲ့ ပို့စ်လေးတွေ မျိုးစုံပေး ကာ မိမိုက် လွန်းနေတဲ့ စူးရှထက်
အလုပ်တွေ အဆင်ပြေပြီး အရင်ထက်နုပျို လှပလာရတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ကို ပြောပြလာတဲ့ မေကဗျာ
ဘဝ နဲ့ ရင်းပြီးရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ တွေကို ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် တွင်ကယ်လ်
Previous post ကျစ်လျစ် သွယ်လျ တဲ့ ဘော်ဒီ မိုက်မိုက်လေး ရအောင် လေ့ကျင့် ခန်းတွေ ကြိုးစား လုပ်နေတဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post မြင်သူတိုင်း ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလောက်အောင် ရင်အစုံ ပေါ်လွင်လွန်းနေ တဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ ဗီဒီယို လေးများ
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေ အတွက် ရင်အစုံ ကို လှစ်ဟ ပြသလိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
ချစ်သူလေး နဲ့ အပီအပြင် ရိုနေတဲ့ပုံလေးကို ပရိတ်သတ်တွေ အားကျသွားအောင် တရားဝင်ချပြလာတဲ့ အေးမြတ်သူ